Access to Information Manual (isiZulu) | Government Communication and Information System (GCIS)
Home » Resource centre » Guidelines » Access to Information Manual
Access to Information Manual (isiZulu)
Access PDF version [PDF] 107 kb
Ibhukwana Ngokwesigaba se-14 Sokuthuthukisa Umthetho Wokufinyelela Olwazini (PAIA), 2000 (Umthetho wesi-2 ka-2000)
Isitatimende sokwethula leli bhukwana
Umbono we-GCIS, nalokho ephokophele ukukwenza kanye nezinjongo zayo
2.1 Imisebenzi yezinhlaka ze-GCIS
2.2 Isimo sohlaka lokuphatha lwe-GCIS
Imininingwane yokuxhumana Nesikhulu Esengamele Ulwazi
Umhlahlandlela weKhomishani Yamalungelo Esintu yaseNingizimu Afrika wokusetshenziswa koMthetho
5.1 Incazelo yezinhlobo zolwazi olugcinwe yi-GCIS
5.2 Ulwazi olugciniwe olutholakala kalula kwa-GCIS
5.3 Inqubo elandelwayo yokucela ulwazi
Amakhambi okulungisa isimo esiphathelene nezenzo ezithile ezingalungile noma esiphathelene nokwahluleka ukuthatha izinyathelo ezifanele
Imali enqunyiwe ekhokhelwa ukuthola ulwazi
Amafomu asemthethweni asetshenziselwa ukuthola ulwazi olugcinwe wuphiko lukahulumeni
1. Isitatimende sokwethula leli bhukwana
Leli bhukwana lenzelwe ukuba ngumhlahlandlela ozosetshenziswa amalungu omphakathi ukuthola ulwazi olugcinwe yi-GCIS. Linikeza incazelo yohlobo lolwazi olutholakalayo emnyangweni kanti futhi liyakuchazela ukuthi ungaluthola kanjani ulwazi.
UMthetho Okhuthaza Ukutholakala Kolwazi, wonyaka wezi-2000, ukubeka ngokucacile ukuthi uphiko ngalunye kumele luqoke Isikhulu Esengamele Ulwazi kanye Ne/Namaphini Le/Esikhulu Esengamele Ulwazi, okuyibona ababhekene nomsebenzi wokucubungula izicelo zokuthola ulwazi, futhi balekelele labo abafaka izicelo ukuthi bakwazi ukufaka izicelo zabo ngendlela efanele.
Leli bhukwana liyisiqalo sokusetshenziswa kwelungelo lokuthola ulwazi, elibekwe ngokucacile kuMthethosisekelo waseNingizimu Afrika, 1996 (Umthetho we-108 wonyaka we-1996).
2. Umbone we-GCIS, nalokho ephokophele kukwenza kanye nezinjongo zayo
Umbono wayo: “Ukuxhumana nohulumeni ngendlela ethuthukisa izakhamizi futhi ezikhuthazayo ukuthi zibambe iqhaza kwintando yeningi nokuthi kuphuculwe izimpilo zabo bonke abantu”.
Lokho ephokophele ukukwenza: Ukuhola uhlelo lukahulumeni lwezokuxhumana, ukuqinisekisa umlayezo ophusile, olandelekayo nokuthi kuvulwe futhi kwandiswe amaxhama ezokuxhumana phakathi kukahulumeni kanye nabantu, ukuze kufinyelelwe kumbono ofanayo.
Izinjongo ezibalulekile namasu okusebenza
Ukuhlinzeka ngobuholi obunohlonze kwezokuxhumana nohulumeni
Ukuqinisa nokulawula uhlelo lwezokuxhumana kuzo zonke izinhlaka zikahulumeni ukuze lusebenze ngendlela efanele futhi luhambelane kahle
Ukufunda kanye nokuzama izindlela zokuxhumana ezihlukahlukene ukuze kuphuculwe ezokuxhumana
Ukuhola kanye nokulawula ukukhangiswa kweNingizimu Afrika ngaphakathi ezweni kanye nasemhlabeni wonke jikelele
Ukwakha amaxhama okubambisana nalabo abathintekayo ababalulekile ukuze kufezekiswe umbono we-GCIS
Ukulawula inhlangano yezokuxhumana kahulumeni esebenza ngendlela efanele, enemiphumela ebonakalayo futhi elandela umthetho
I-GCIS ihlelwe ngendlela eyenza ikwazi ukwenza umsebenzi wayo njengoba ubhaliwe lapha ngenhla. Inezinhlaka noma izimpiko eziyi-12:
Olwengamele Umsebenzi Wezokuxhumana
Lwezezimali, Ukulawulwa Kwempahla Ethengwayo kanye Nokulawulwa Kwayo Yonke Impahla Ekhona
Lokuhlela Ngokusebenzisa Amasu Nokulawulwa Kwezinhlelo
Lokuxhumana Nezifundazwe kanye Nohulumeni Bendawo
Uphiko Lwenqubomgomo Nocwaningo lwenza ucwaningo ukuhlola indlela okumele uhulumeni abhekelele ngayo izidingo zomphakathi kwezokuxhumana futhi lulandela lokho okubhalwa ngabezindaba okuphathelene nezinhlelo zikahulumeni mayelana nezokuxhumana. Lolu phiko lulawula Uphiko Locwaningo Nolwenqubomgomo kanye nophiko olwengamele Ukuhlaziywa kwalokho okushiwo ngabezindaba.
Uphiko Lokuxhumana Nabezindaba luhlose ukuqinisekisa ukuthi umphakathi uyaziswa ngomsebenzi owenziwa nguhulumeni, ngokulawulwa okufanele kwalokho okushiwo ngabezindaba ngaphakathi kuleli lizwe kanye nalokho okushiwo ngabezindaba emhlabeni wonke jikelele nokulawula Ihhovisi Lephalamende. Lolu phiko yilona futhi olweseka Umkhulumeli Kahulumeni futhi lweseke iminyango kahulumeni ngokuhlinzeka umsebenzi wokulawula isimo uma kunezinkinga ezinkulu.
Uphiko Olwengamele Umsebenzi Wezokuxhumana luhlinzeka i-GCIS neminye iminyango kahulumeni ngemisebenzi ebalulekile yezokuxhumana, ngaphakathi emnyangweni ngamunye kanye nangokusebenzisa izinkampani zokuxhumana zangaphandle. Lolu phiko luphucula futhi luhlanganise izinhlelo okuzokhulunywa ngazo emikhankasweni kahulumeni yezokuxhumana ngokudidiyela izikhangiso zomsakazo noma imidlalo yomsakazo, izinhlelo ezizosakazwa bukhoma emisakazweni yomphakathi, kanye nezinhlelo zevidiyo nezikhangiso; nokulandela izigameko ezenzekayo nemicimbi (ngevidiyo nezithombe); kanye nokuphendula mayelana nezicelo zemisebenzi yobuciko.
Uphiko Lwengqikithi Nokubhala luhlose ukwenza imilayezo engumongo, izindikimba kanye nolimi oluzosetshenziswa ukuthumela leyo milayezo engumongo. Yilona futhi lolu phiko olwenza ingqikithi ephathelene nemikhiqizo ezokhishwa yi-GCIS.
Uphiko Lwezabasebenzi luhlose ukuhlinzeka i-GCIS ngemisebenzi yokweseka esezingeni eliphezulu futhi enemiphumela emihle mayelana nokuqashwa, nokugcinwa kanye nokuthuthukiswa kwabasebenzi abanekhono futhi abahlukahlukene abasekela lokho okuphokophelwe yi-GCIS, umbono wayo kanye namagugu ayo.
Uphiko Lobuchwepheshe Bolwazi luhlinzeka umnyango ngezeluleko kanye nenqubo yamasu okumele ilandelwe ephathelene nobuchwepheshe bolwazi. Lolu phiko lulawula futhi luqaphe ukuqaliswa kokusebenza koHlelo lweminyaka emihlanu Lobuciko Bolwazi Nezokuxhumana emnyangweni.
Uphiko Lwezezimali, Ukulawulwa Kwempahla Ethengwayo kanye Nokulawulwa Kwayo Yonke Impahla Ekhona lwenza umsebenzi wokunikeza ubuholi mayelana nokuphathwa kwezimali kanye nokulawulwa kwempahla ethengwayo.
Uphiko Locwaningo Lwangaphakathi lwenza umsebenzi wokuhlinzeka ngezeluleko ngendlela ekhombisa ukuzimela futhi engachemile ngenhloso yokuphucula imisebenzi eyenziwa yi-GCIS kanye nokuqinisekisa ukulawulwa kobungozi okwenziwe ngcono kanye nezinqubo ezilandelwayo zokulawula ukwengamela.
Uphiko Lokuhlela Ngokusebenzisa Amasu kanye Nokulawulwa Kwezinhlelo luhlinzeka ngomsebenzi wokulawulwa kwemiklamo okusezingeni eliphezulu ukuze kuphuculwe ukusebenza ngenkathi kwenziwa umsebenzi onikwezwe i-GCIS. Lolu phiko futhi lwenza umsebenzi wokuqinisekisa ukuhambelana kwezinhlelo nokuqaliswa kokuhlela ngokusebenzisa amasu okunemiphumela emihle kanye nokubhekisiswa kwendlela okusetshenzwa ngayo, ngokulandela imithetho efanele.
Uphiko Lokuxhumana Nezifundazwe Kaye Nohulumeni Bendawo lwenza umsebenzi wokunikeza ubuholi mayelana nokuhambelana phakathi kwezokuxhumana kuhulumeni kazwelonke nezinhlelo zokuxhumana ezifundazweni. Ngokusebenzisa amahhovisi ezifundazwe, lolu phiko luhlinzeka ngamaxhama okuxhumana nohulumeni asebenza kahle.
2.2 Isakhiwo sokuphatha i- GCIS
3. Iminingwane yokuxhumana nesikhulu Esengamele ulwazi
Umphathi Oyinhloko nguyena Oyisikhulu Esengamele Ulwazi ngokwemigomo ye-PAIA, 2000. I-GCIS inePhini Lesikhulu Esengamele Ulwazi elilodwa:
Ikheli Leposi: Private Bag X745, PRETORIA, 0001
Ikheli Lomgwaqo: 356 Midtown Building, cnr Prinsloo and Vermeulen streets, PRETORIA
Ucingo: (012) 314-2150
Ifeksi: (012) 325-3020
Iselula: 083 645 0810
Isikhulu Esengamele Ulwazi: Mnu. Jimmy Manyi
Iphini Lesikhulu Esengamele Ulwazi: Mnu. Keitumetse Semakane
Ucingo: (012) 314–2301
Ifeksi: (012) 326–7447
Iselula: 079 696 1826
4. Umhlahlandlela Wekhomishana Yamalungelo Esintu YaseNingizimu Afrika (SAHRC) Wokusetshenziswa Kwe-PAIA, 2000 [Isigaba 14 (1) (C)]
I-SAHRC (lapha ebizwe njenge ‘khomishini’) ngokweSigaba 10 se-PAIA, 2000, izohlanganisa incwadi ngokusetshenziswa kwalo Mthetho. Lo mhlahlandlela uyatholakala kwikhomishana. Nanoma iyiphi imibuzo ephathelene nalo mhlahlandlela kumele iqondiswe kwikhomishana ku:
Ucingo: (011) 484-8300
Ifeksi: (011) 484-1360
5. Incazelo yezifundo lapho i-GCIS egcina khona amarekhodi
5.1 Ngenjongo yokwenza lula uhlelo lokucutshungulwa kwezicelo ngokwemigomo yoMthetho, izinhlobo zolwazi olugcinwe yi-GCIS kanye nemikhakha yohlobo ngalunye yolwazi olugciniwe ime kanje:
A. Inqubomgomo Nocwaningo
Imininingwane echachisayo neziphakamiso zocwaningo.
Amasethi emininingwane, imibiko kanye nezethulo.
Umthetho Wophiko Lokuthuthukiswa Kwemithombo Yabezindaba kanye Nokwahlukahlukana (MDDA), 2002 (uMthetho 14 ka-2002).
Imiqulu Equkethe Imithombo Yolwazi (South African Government Directory, Directory of Contacts, Media Directory and Profiles).
Imibiko yezindaba ezikhishwa ngabezindaba ngaphakathi kuleli lizwe kanye nasemhlabeni jikelele
Imininingwane ephelele yezindaba ezibhalwe ngabezindaba ngaphakathi kuleli lizwe kanye nasemhlabeni jikelele
Ingqikithi yezokuxhumana kanye nemibiko ebalulekile.
B. Ukuxhumana Nabezindaba
Government Communicators’ Handbook
Izizinda eziqukethe imininingwane yabezindaba kanye nalabo abaxhumana nohulumeni.
C. Uphiko Olwengamele Umsebenzi Wezokuxhumana
Izincwadi ezishicileliwe (ezibhalwe ephepheni)
Izikhangiso kanye nezinhlelo ezikhishwa emsakazweni
Imisebenzi yokukhangisa nokusabalalisa
Imibiko ephathelene nokuthengwa kwezindaba
Izithombe kanye nemifanekiso eyenziwe ngevidiyo.
D. Ingqikithi Nokubhala
Ulwazi luyatholakala kwiwebsayithi ye-GCIS, nakwiwebsayithi equkethe Ulwazi Oluphathelene noHulumeni, kanye nakwiwbsayithi Yemisebenzi kaHulumeni
Izincwadi eziphathelene nenqubomgomo nemihlahlandlela
South Africa Yearbook kanye ne-Pocket Guide to South Africa.
E. Uphiko Lwezabasebenzi
Izinqubomgomo, indlela yezinqubo ezilandelwayo kanye nezincwadi ezichachisayo
Izincwajana eziqukethe izindaba zangaphakathi
Amasu okulawulwa kwabasebenzi kanye nokuthuthukiswa kwabasebenzi
Uhla oluqukethe amagama ezikhulu ezengamele ulwazi kuhulumeni.
F. Ubuchwepheshe Bolwazi
G. Ezezimali, Ukulawulwa Kwempahla Ethengwayo kanye Nokulawulwa Kwayo Yonke Impahla Ekhona
Isizinda esiqukethe imininingwane yezinkampani ezihlinzeka ngemisebenzi
Imininingwane egciniwe ephathelene nezimali kanye nezitatimende
Izinqubomgomo kanye nendlela yezinqubo ezilandelwayo
H. Ucwaningo Lwangaphakathi
I. Ukuhlela Ngokusebenzisa Amasu kanye Nokulawulwa Kwezinhlelo
Izincwadi eziphathelene nemiklamo
Government Communication Programme
J. Ukuxhumana Nezifundazwe Kaye Nohulumeni Bendawo
Amasu esikhungo se-Thusong Service Centre
Amasu Ezokuthuthukiswa Kwezokuxhumana kanye nempahla esetshenziswayo.
Impahla esetshenziselwa ukukhangisa.
5.2 Uwazi olugciniwe olutholakala kalula kwa-GCIS – Section 14 (1) (E)
Ulwazi olutholakala kwiwebsayithi ye-GCIS, www.gcis.gov.za, lutholakala kalula ngaphandle kokufaka isicelo sokuluthola. Eminye imikhiqizo nolwazi olushicileliwe olutholakala kalula ngaphandle kokufakwa kwesicelo ibandakanya:
Izincwajana eziqukethe ulwazi
Amakhasi aqukethe ulwazi
Izindaba ezitholakala ku:www.buanews.gov.za/index.html
(a) Ukwamukelwa noma ukuchithwa kwesicelo:
Umfakisicelo kumele anikezwe ulwazi lwesikhungo sikahulumeni olugciniwe uma ekwenzile lokhu okulandelayo:
Uma umfakisicelo ekwenzile konke okuyizidingo okumele zilandelwe ngokwemigomo yoMthetho mayelana nesicelo sokuthola lolo lwazi olugciniwe
Uma isicelo sokuthola ulwazi singachithwanga ngenxa yanoma isiphi isizathu sokwesinqaba isicelo esishiwo nguMthetho.
(b) Lutholakala kanjani ulwazi olugciniwe:
Umfakisicelo kumele asebenzise ifomu (Ifomu A) elikhishwe kuSomqulu Kahulumeni (Isaziso Sikahulumeni R187 samhlaka ziyi-15 kuNhlolanja 2002).
Umfakisicelo kumele asho uma efuna ikhophi yolwazi olugciniwe, noma uma efisa ukuzifikela mathupha emahhovisi e-GCIS azolucubungulela khona ulwazi olugciniwe. Uma ulwazi olugciniwe lungeyona incwadi ebhaliwe, lungabukelwa ngalolo hlobo olutholakala ngalo, uma kwenzeka.
Uma umfakisicelo ecela ukuthola ulwazi ngohlobo oluthile (isib. ikhophi etholakala ngephepha, ikhophi yohlobo lwe-elekthronikhi,njll.), kumele anikezwe lolo lwazi ngohlobo alufuna ngalo. Ngaphandle uma lokho kungaphazamisa ukusebenza kwesikhungo sikahulumeni leso, noma kulimaze ulwazi olugciniwe, noma kuphazamise amalungelo obunini bolwazi angekho ngaphansi kwesandla sikahulumeni. Uma, ngenxa yezizathu eziphathekayo, ulwazi olugciniwe lungeke lunikezwe ngohlobo oludingeka ngalo kodwa lutholakala ngolunye uhlobo, lokho kusho ukuthi imali ekhokhwayo kumele ibalwe ngokubheka indlela umfakisicelo acele ngalo ulwazi ekuqaleni.
Uma, ngaphezu kwempendulo yesicelo sakhe sokuthola ulwazi ebhalwe phansi, umfakisicelo efisa ukwaziswa ngesinqumo nganoma iyiphi enye indlela, isib. ngocingo, lokho kumele akuveze.
Uma umfakisicelo ecela ulwazi egameni lomunye umuntu, kumele aveze ukuthi yiliphi igunya analo alinikeziwe lokucela ulwazi.
Uma umfakisicelo engakwazi ukufunda noma ukubhala, noma enokukhubazeka, isicelo singanikezwa ngomlomo. Uma kunjalo, Isikhulu Esengamele Ulwazi kumele simgcwalisele ifomu lowo mfakisicelo bese simnikeza ikhophi yefomu eligcwalisiwe.
(c) Imali ekhokhelwa isicelo kanye nokwaziswa ngomphumela wesicelo sokuthola ulwazi:
Umfakisicelo ofuna ukuthola ulwazi olugciniwe oluphathelene naye uqobo noma olungolwakhe akudingekile ukuthi akhokhe imali yokufaka isicelo. Abanye abafakizicelo kumele bakhokhe imali yokufaka isicelo engu-R35.
Isikhulu Esengamele Ulwazi kumele sazise umfakisicelo (uma kungeyena umfakisicelo ofuna ukuthola ulwazi oluphathelene naye uqobo) ngokumthumelela isaziso sokuthi kumele akhokhe imali enqunyiwe yokufaka isicelo (uma ikhona imali okumele ikhokhwe) kanye nemali eyisibambiso (uma ikhona imali eyisibambiso okumele ikhokhwe) ngaphambi kokuthi kuqhutshekwe nokucutshungulwa kwesicelo.
Umfakisicelo unelungelo lokufaka isicelo sokudlulisa ukulalelwa kwesicelo kwangaphakathi, uma kudingekile, noma afake isicelo enkantolo esiphikisa ukukhokhwa kwemali ekhokhelwa ukuthola ulwazi.
Emva kokuthi Isikhulu Esengamele Ulwazi sesisithathile isinqumo mayelana nesicelo, umfakisicelo kumele aziswe ngesinqumo leso ngendlela acele ukuthi aziswe ngayo.
Ulwazi olugciniwe ngeke lukhishwe kuze kukhokhwe yonke imali okumele ikhokhwe.
6. Amakhambi okulungisa isimo esiphathlene nezenzo exithile ezingalungile noma esiphathlene nokwahluleka ukuthatha izinyathelo ezifanele
Le nqubo elandelayo kumele isetshenziswe ngabantu abafuna ukubika noma ukulungisa isimo esiphathelene nezinsolo zezenzo ezingalungile, ezingafanele noma ezingekho emthethweni noma ukwahluleka ukuthatha izinyathelo ezifanele okwenziwe yi-GCIS noma abasebenzi bayo:
(a) Inqubo yokubika noma yokuthola ikhambi lokulungisa isimo:
Amakhambi okulungisa isimo esiphathelene nezenzo ezithile ezingalungile noma ukwahluleka ukuthatha izinyathelo ezifanele ngokwemigomo ye-PAIA, 2000: Isiphathimandla esinegunya lokulalela ukudluliswa kwezicelo kwangaphakathi ngokwezinhloso zalo Mthetho nguNgqongqoshe. Emva kokuzama uhlelo lwangaphakathi lokulalela ukudluliswa kwesicelo, isicelo singafakwa enkantolo (izigaba 78 – 82).
Isisebenzi sikahulumeni sinelungelo lokufaka isikhalazo ukuze siphenywe Yikhomishana Yemisebenzi Kahulumeni mayelana nesenzo esingalungile noma ukwahluleka ukuthatha izinyathelo ezifanele (Isigaba 35 soMthetho Wezemisebenzi Kahulumeni, 1994 [uMthetho 103 ka-1994]).
Umuntu uvumelekile ukusebenzisa amakhambi ezabasebenzi okulungisa isimo esiphathelene nezenzo ezingalungile noma isenzo sokwahluleka ukuthatha izinyathelo ezifanele mayelana nezindaba eziphathelene nezabasebenzi, ezinjengemibango ephathelene namalungelo (uMthetho Wezemisebenzi Kahulumeni, 1994, kanye noMthetho Wezobudlelwane Babasebenzi, 1995 [uMthetho 66 ka-1995]).
Umuntu uvumelekile ukuthi afake isikhalazo kumhloli owengamele izindaba zabasebenzi mayelana nezinsolo zokuphulwa koMthetho Wemibandela Eziyisisekelo Sokuqashwa Kwabasebenzi, 1997 (uMthetho 75 ka-1997) – isigaba 78(1)(a), noma uMthetho Wokulingana Emsebenzini, 1998 (uMthetho 55 ka-1998) – Isigaba 34(e).
Umuntu uvumelekile ukuthi afake isikhalazo kuMvikeli Womphakathi mayelana nezinsolo zesenzo esingekho emthethweni noma esingafanele noma isenzo sokwahluleka ukuthatha izinyathelo ezifanele (uMthethosisekelo kanye noMthetho Womvikeli Womphakathi, 1994 [uMthetho 23 ka-1994]).
Umuntu uvumelekile ukuthi afake isikhalazo ku-SAHRC mayelana nezinsolo zesenzo sokubukelwa phansi noma sokubekwa engozini kwanoma yiliphi ilungelo eliyisisekelo (uMthetho Wekhomishana Yamalungelo Esintu, 1994 [uMthetho 54 ka-1994]).
Ukuze kube nokuvikeleka ezenzweni zokuziphindisela ngenxa yokudalulwa kolwazi oluphathelene nokuziphatha okungekho emthethweni noma okungafanele okwenziwe ngumqashi noma nguzakwenu, umuntu okukhulunywa ngaye lapha angalandela izinqubo zokudalulwa kolwazi ezikuMthetho Wokudalulwa Kolwazi Ngendlela Evikelekile, 2000 (uMthetho 26 ka-2000).
Umuntu uvumelekile ukusebenzisa amanye amakhambi okulungisa isimo asemthethweni afana nokuthatha izinyathelo zasenkantolo zokubuyekezwa kwesenzo esiphathelene nokuziphatha okungafanele ngokoMthetho Wokukhuthazwa Kwezobulungiswa Bezokuphatha, 2000 (uMthetho 3 ka-2000).
(b) Amanye amakhambi okulungisa isimo angasetshenziswa:
Umuntu uvumelekile ukucela izizathu zesenzo sokuziphatha okungafanele ngokoMthetho Wokukhuthazwa Kwezobulungiswa Bezokuphatha, 2000 (Isigaba 5).
Umuntu uvumelekile ukucela ukuthola ulwazi olugciniwe lomnyango kahulumeni noma esinye isikhungo sikahulumeni ngokwemigomo ye-PAIA, 2000 (Isigaba 11).
(c) Isibopho sokubika:
Isisebenzi sikahulumeni, ngenkathi senza umsebenzi waso, siphoqelekile ngokweMigomo Yokuziphatha ukuthi sibikele iziphathimandla ezifanele uma kunezenzo zokukhwabanisa, inkohlakalo, ukuqashana ngobuhlobo, ukungaphathi ngendlela efanele kanye nanoma yisiphi isenzo sokuphulwa komthetho, noma isenzo esingalimaza lokho okuyizidingo zomphakathi. Isisebenzi esingakwenzi lokhu sinecala lokungaziphathi kahle. (Umtheshwana B.3 kanye no-C.4.10 weSahluko 2 Semitheshwana Yezemisebenzi Kahulumeni, 2001)
Isibopho sabo bonke abaqashi kanye nabasebenzi sokudalula ukuziphatha okuhambelana nenkohlakalo kanye nanoma yikuphi ukuziphatha ngendlela engafanele emsebenzini siyisisekelo soMthetho Wokudalulwa Kolwazi Ngendlela Evikelekile, 2000 (lokhu kutholakala Esitatimendeni Sokwethula lo Mthetho).
7. Imali enqunyiwe yezikhungo zikahulumeni
(Ingxenye II Yesaziso 187 Kusomqulu Kahulumeni Esikhishwe mhla ziyi-15 kuNhlolanja 2002)
1. Imali ekhokhelwa ikhophi yencwadi echachisayo njengoba kubhaliwe kumtheshwana 5(c) ngu-R0,60 ngefothokhophi ngayinye yekhasi elingu-A4 noma ingxenye yalo.
Imali yokukhiqiza ulwazi okukhulunywa ngayo kumtheshwana 7(1) ime ngalolu hlobo:
(a) ifothokhophi ngayinye yekhasi elingu-A4 noma ingxenye yalo R0,60
(b) ikhophi ngayinye ebhaliwe eyi-A4 noma ingxenye yayo, yolwazi olugcinwe kwikhompyutha noma olufundwa ngomshini
(c) ikhophi yolwazi olufundwa ngomshini olutholakala nge:
(i) diski eyikhompekthi/i-DVD R40,00
(d) (i) ) umbhalo wemifanekiso ebonakala ngamehlo, ngekhasi elingu-A4 noma ingxenye yalo R22,00
(ii) ikhophi yemifanekiso ebonakala ngamehlo R60,00
(e) (i) umbhalo womsindo oqoshiwe, ngekhasi elingu-A4 noma ingxenye yalo R12,00
(ii) ikhophi yomsindo oqoshiwe. R17,00
3. Imali yesicelo ekhokhwa ngumfakisicelo ngamunye, okungeyena umfakisicelo ofuna ukuthola ulwazi olungolwakhe yena uqobo, okukhulunywa ngaye kuMtheshwana 7(2) ngu- R35,00
Imali yokuthola ulwazi okumele ikhokhwe ngumfakisicelo okukhulunywa ngayo kuMtheshwana 7(3) ime ngalolu hlobo:
1. (a) ifothokhophi ngayinye eyikhasi elingu-A4 noma ingxenye yalo R0,60
(b) ikhophi ebhaliwe ngayinye eyikhasi elingu-A4 noma ingxenye yalo, yolwazi olugcinwe kwikhompyutha noma olufundwa ngomshini R0,40
(i) diski eyikhompekthi R40,00
(d) (i) umbhalo wemifanekiso ebonakala ngamehlo, ngekhasi elingu-A4 noma ingxenye yalo R22,00
(ii) ikhophi yomsindo oqoshiwe R17,00
(f) Imali ekhokhelwa ukucinga kanye nokulungisa ulwazi olugciniwe ukuze ludalulwe, ngu-R15,00 ngehora ngalinye noma ingxenye yalo, lingabaliwe ihora lokuqala, okuyisikhathi esijwayelekile esidingekayo uma kwenziwa lokho kucingwa kolwazi nokulungiswa kwalo.
2. Ngezinhloso zeSigaba 22(2) soMthetho, kuzolandelwa lokhu okungezansi:
(a) Amahora ayisithupha azothathwa njengamahora okumele eqiwe ngaphambi kokuthi kudingeke ukuthi kukhokhwe imali eyisibambiso
(b) Umfakisicelo kumele akhokhe ingxenye eyodwa kokuthathu yemali ekhokhelwa ukuthola ulwazi njengemali eyisibambiso.
3. Uma umfakisicelo efuna ukuposelwa ulwazi olugciniwe kumele akhokhe imali yokuposa efanele.
8. Amafomu asemthethweni asetshenziselwa ukothola Ulwazi olugcinwe wuphiko lukahulemeni
Ifomu A: Isicelo Sokuthola ulwazi olugciniwe Lwesikhungo Sikahulumeni Isigaba 18(1) se-PAIA, 2000 (Isithasiselo b Sesaziso 187 Kusomqulu Kahulumeni Esikhishwe Mhlaziyi-15 Kunhlolanja 2002 [PDF] 151 kb
Phini Lomsebenzi Wezokwazisa We-GCIS:
Mnu Keitumetse Shadrack Semakane